Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Warshadaha Warshadaha » Hotel Pennsylvania oo ku yaal Manhattan ayaa u dhintey COVID-19
Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Nabadgelyo Hotel Pennsylvania
Huteel caan ah oo ku yaal badhtamaha magaalada Manhattan ayaa albaabada u xidhaya wanaag. Hoteelka Pennsylvania dib uma furi doono, isagoo ku dhacay masiibadii COVID-19 ee sanadkii la soo dhaafay iyo sannado si cidhiidhi ah looga fogaan lahaa jarka. Hoteelka afaraad ee ugu weyn magaalada New York wuxuu ku yaal meel aad u wanaagsan, oo ka soo hor jeedda Madison Square Garden iyo Penn Station, taasoo ka dhigaysa joogsi dabiici ah oo la awoodi karo oo loogu talagalay dadka socotada ah iyo kuwa heesaha wada qaada.
Hoteelka waxaa dhisay Pennsylvania Railroad oo markii dambe iibsatay Statler Hotels, isagoo noqday Hotel Statler.
Huteelka ayaa dib loo beddelay ka dib markii laga iibiyey Conrad Hilton 1954 -kii markii uu noqday The Statler Hilton ka dibna loo beddelay New York Statler ka dib markii la iibiyey 1979 -kii.
Dhowr isbeddel oo kale oo lahaansho ayaa magaceedii u beddelay New York Penta, kaliya ugu dambayntii waxay ku dambaysay metamorphosis -kii ugu dambeeyay ee ay ku noqotay Hotel Pennsylvania.
Hoteelka Pennsylvania waxaa dhistay Pennsylvania Railroad waxaana maamula Ellsworth Statler. Waxaa la furay Janaayo 25, 1919 waxaana naqshadeeyay William Symmes Richardson oo ka tirsan shirkadda McKim, Mead & White, kaas oo sidoo kale naqshadeeyay Saldhigii asalka ahaa ee Pennsylvania oo ku yaallay waddada dhinaceeda.
Hoteelada Statler, oo maamulayay Pennsylvania ilaa dhismihiisii, waxay hantida si toos ah uga heshay Pennsylvania Railroad June 30, 1948, waxayna u magacowday Hotel Statler 1 -dii Janaayo, 1949. Dhammaan 17 -kii hoteel ee Statler waxaa laga iibiyey Conrad Hilton 1954 iyo huteelku wuxuu noqday The Statler Hilton 1958. Waxay ku shaqaynaysay magacan ilaa 1979kii, markii Hilton uu hudheelka ka iibiyay horumariye William Zeckendorf, Jr., $ 24 milyan. Huteelka ayaa loo bixiyey magaca New York Statler waxaana maamula Dunfey Family Hotels, oo ah qayb ka mid ah Aer Lingus. Hoteelka ayaa mar labaad lagu iibiyey $ 46 milyan bishii Ogosto 1983. 50% dulsaar ah waxaa iibsaday Abelco, oo ah koox maalgashi oo ka kooban horumariyayaal Elie Hirschfeld, Abraham Hirschfeld, iyo Arthur G. Cohen, iyadoo 50% kale ay iibsadeen silsiladda Hoteellada Penta. , oo ay iska kaashadeen British Airways, Lufthansa, iyo Swissair. Milkiilayaasha cusub ayaa u badalay hoteelka New York Penta waxayna sameeyeen dayactir aad u weyn. Sannadkii 1991 -kii, la -hawlgalayaasha Penta waxay iibsadeen saamiga silsiladda ee hoteelka waxayna ku celiyeen magaceedii hore, Hotel Pennsylvania.
Waxaa jira qaddar cadaalad ah oo huteelkan weyn, gaar ahaan The Glenn Miller Orchestra's “Pennsylvania 6-5000”. Ilaa horraantii Maajo 2021, waxaad weli wici kartaa 212-PE6-5000, oo maqli kartaa odhaahda "Pennsylvania 6-5000" ka hor intaadan ku xirmin xiriiriyaha. Waxay ahayd adeegsiga ugu dheer ee joogtada ah ee lambarka taleefanka ee New York. Laga soo bilaabo markii aad wacday hudheelka, muusigga iyo taariikhdu waxay kugu martiqaadeen inaad dib u xasuusato dhaqankii weynaa ee Hoteel Pennsylvania.
Café Rouge wuxuu markii hore ahaa maqaayadda ugu weyn ee Hotel Pennsylvania. Waxay sanado badan u ahayd goob lagu caweeyo, laakiin hadda waxay u shaqaysaa sidii goob ka gooni ah hudheelka oo dhan, oo ah meel ujeedo badan leh. Waa meesha keliya ee hudheelka ka badbaaday isbeddello waaweyn intii lagu jiray dayactirkii ballaarnaa ee 1980 -meeyadii.
Dabayaaqadii 1930 -meeyadii iyo horraantii 1940 -meeyadii, The Café Rouge wuxuu lahaa xiriir weyn oo fog fog NBC Red Network (wixii ka dambeeyay 1942, Shabakadda Raadiyaha NBC) wuxuuna caan ku noqday bandhigyada tooska ah ee lagu qabto gudaha. Farshaxanno badan ayaa ku ciyaaray Café - sida The Dorsey Brothers, Wood Herman, Count Basie, Duke Ellington, iyo The Andrews Sisters.
Habeen fiidkii bishii Nofembar 1939, markii ay ku jirtay hawlgal joogto ah oo muddo dheer ah oo ka socday Café Rouge, hoggaamiye kooxeedka Artie Shaw ayaa ka baxay barxadda inta u dhexeysa jaangooyooyinka wuxuuna go'aansaday inuu ku filnaa ganacsigii kooxda iyo dhammaan buunbuunintii noqotay, sannad iyo badh, hoggaamiyaha kooxda weyn ee ugu caansan dalka. Shaw asal ahaan wuxuu ka tagay kooxdiisii ​​isla goobtii, falkaas oo ku qasbaya New York Times inuu faallo ka bixiyo tifaftirka.
Intii lagu jiray 1940-42, Kooxda Glenn Miller Orchestra waxay sidoo kale qolka ku soo celisay ballansasho waqti dheer ah intii lagu jiray saddexdii sano ee ugu sarreysay Miller sida hoggaamiye kooxeed. Farshaxanka Miller ee baahinta Café; qaar waxaa duubay RCA Victor. Abaabulaha guud ee Shaw intii u dhaxaysay 1937-39, Jerry Gray, ayaa isla markiiba Miller u shaqaaleeyay inuu yahay qabanqaabiyaha shaqaalaha markii Shaw uu ka tagay kooxdiisii; waxay ahayd xilligii uu Miller ka hawlgalayay hudheelka 1940kii Gray wuxuu qoray heesta “Pennsylvania 6-500” (oo leh ereyo uu mar dambe ku daray Carl Sigman) oo isticmaalay lambarka taleefanka Hoteelka, 212-736-5000, kaas oo ahaa taleefanka New York Tirada isticmaalka joogtada ah ee ugu dheer, kooxda Les Brown, oo leh cod -qaade Doris Day, waxay ku soo bandhigeen heesta “Socdaalka Dareenka” Café bishii Nofembar 1944.
Guddiga Ilaalinta Astaamaha Magaalada New York waxay dib -u -eegeen Café Rouge oo loogu talagalay heerka calaamadaynta iyadoo lagu salaynayo waraaqaha qiimaynta ee uu abuuray Ururka Ilaalinta Hoteelka Pennsylvania (oo hore u ahaan jiray Save Hotel Pennsylvania Foundation). Oktoobar 22, 2010, Café waxaa loo diiday inuu noqdo musharrax calaamad -dhigis, waxay u badan tahay sababta oo ah mashruuca 15 Penn Plaza waa la oggolaaday iyo dhexdhexaad, laakiin ma aha wax -ka -beddellada wax -ku -oolka ah ee gudaha tan iyo markii la dhisay. Mashruuca 15 -ka ee Penn Plaza waxaa ku jiri lahaa burburinta Maqaayadda.
Inta badan qurxinta asalka ah ee asalka ah weli waa dhawrsan yihiin. Aasaaska iyo saqafka iftiimay iyo faahfaahinta kale ee dhismaha ayaa weli ah, in kasta oo qolka oo dhan, iyo sidoo kale saqafka, lagu rinjiyeeyay caddaan. Dhacdooyin badan oo ka yimid Toddobaadka Fashion -ka New York ee 2013 ayaa lagu qabtay Café Rouge.
Sanadkii 2014, Café Rouge waxaa loo beddelay maxkamad kubbadda koleyga gudaha ah oo loo yaqaan Terminal 23, si loogu xuso bilowga Melo M10 oo ay samaysay qeybta Brand Brand ee Nike. Waxay siisaa xarun dhalinyarada iyo ciyaartooyda dugsiga sare.
Doris Dabish wuxuu leeyahay,
Ogosto 28, 2021 markay tahay 22:02
Aad baan uga xumahay inaan arko inay u dhowdahay, waxay tagtay siminaaro caafimaad oo badan 35kii sano ee la soo dhaafay. Waxay noo ahayd goob kulan muddo 50 sano ah.